Pero: ankizivavy kely mpianatra nanontany ny vadin’ny filoha amerikana momba ny fanavaozana ny fifindramonina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2010 7:57 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 繁體中文, 简体中文, Italiano, македонски, Français, English
Ny faha 19 may lasa teo, ny vadin'ny filoham-pirenena any Etazonia, Michelle Obama sy Ramatoa Margarita Zavala, vadin'ny filohan'i Meksika, Felipe Calderon, dia nitsidika sekoly fanabeazana fototra iray tany Silver Spring any Maryland. Tao anatin'ny fitsidihana dia zazavavy kely iray 7 taona antsoina hoe Daisy, no nametraka fanontaniana tamin-dRamatoa Obama, ary azon'ny haino aman-jery an-tsary mihetsika izany. Araka ny antsipiriany navoakan'ny Washington Post, dia te hahafantatra ity zazavavy kely ity hoe nahoana no “mandroaka ireo tsy manana taratasy” ny filoha. Ramatoa Obama, niaraka tamin'ny vadin'ny filohan'i Meksika teo akaikiny, no namaly ilay zazavavy : “Izany zavatra izany no dinihanay izao, mazava ve? Hanamarinana fa afaka mipetraka aty ny olona miaraka amin'ny taratasy mazava”. Avy eo dia namaly ilay zazavavy fa ny “reniny tsy manana taratasy na inona na inona”.
Nasain'ireo mpitoraka bilaogy peroviana nilaza ny momba azy sy ny mikasika ny zavatra iainan'ny mpifindra monina hafa peroviana any Etazonia razazavavy.
Ny bilaogy Holismo Planetario en la Web [es] no niantso an'i Daisy hoe“Ny endriky ny mpifindra monina any Etazonia”:
Ilay zazavavy 7 taona, izay nanontany ny vadin'ny filoha amerikana Michelle Obama ny amin'ny azo atao hanalana ny tahotry ny reniny ho voaroaka miverina mody any Pero satria mpifindra monina tsy manana taratasy mazava, dia noheverina ho “mpitondra tenin'ireo mpifindra monina 12 tapitrisa tsy manana taratasy monina tsy ara-dalàna any amin'ity firenena ity. Niteraka zavatra tsy fahita teo amin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety tany Etazonia ny fihetsika tsy misy tsiny nasehon'ity zazavavy ity mikasika fanontaniana misy fandrika tahaka izao.
Ny bilaogy Libretita de Notas [es] manana fijery hafa momba ny fivelarana:
Ho an'ny olona sasany dia mahery fo razazavavy, ho an'ny hafa kosa, zanaka vavin'ny mpivady peroviana niditra antsokosoko tany Etazonia, ary tsy manana fahazoan-dalana hipetraka any, dia tsy maintsy averina mody any aminy faran'izay haingana indrindra. Ny zava-misy aloha dia ilay zazavavy kely Daisy Cuevas no niteraka ady hevitra momba ny lalàna volamenan'ny fanaovan-gazety izay milaza fa ny mikasika ny zaza tsy ampy taona dia tsy azo avoaka gazety, na dia izy ireny aza no voalaza ao amin'ny lohateny lehibe.
Na izany aza, inona no hitranga raha misy olona mametraka ny vadin'ny filoha eo amin'ny kihon-dalana tery amin'ny fanontaniana azy raha marina ny filazana fa ny vadiny dia tsy mankasitraka ny fanavaozana ny fifindra-monina mba hahafahan'ny ray aman-dreniny mipetraka any Etazonia fa tsy averina mody satria tsy manana taratasy?
Diaben'ny mpifindra monina nalefan'i Señor Adventure ary nahazoana alalana tamin'ny Creative Commons .
Ao amin'ny bilaogy ABC News, dia misy fanehoan-kevitra samy hafa manohitra ny toerana misy ny ray aman-drenin'i Daisy:
PBW miteny: Amerikana aho ary anglisy ny vadiko. Tonga teto ara-dalàna izy. Heveriko fa tokony hanara-dalàna tahaka azy daholo ny mpifindra monina rehetra. Tsy mendrika izany ny ankizy kanefa izay no izy.
Kim miteny: raha jerena ny taon'ilay zaza, efa nipetraka teto nandritra ny 7 taona izany ny reniny, naninona izy no tsy nikarakara ny taratasiny?.
Jiolahimboto iray miteny: raha karamaintsika mora kely izy ireo dia tsy hankaty intsony.
Araka ny voalazan'ny DePeru.com [es], manodidina ny 3 tapitrisa eo ny peroviana any ivelany: 52% amin'ireo any Etazonia, 27% any amin'ny firenena hafa any Amerika atsimo, 13% any Eropa ary 8% any Azia. Ao amin'io vohikala io ihany no ahitana fa ny peroviana mipetraka tsy ara-dalàna any Etazonia dia miasa tsy ara-dalàna manao asa madinika.
Araka ny famintinana nataon'i Herberth Castro Infantas [es] ao amin'ny bilaoginy:
Irintsika rehetra fa tsy ity resaka ity no hanjary alaolana hamaliana faty ny fianakaviany hataon'ireo mpifindra monina tsy manana taratasy ara-dalàna.
Soratra miverina: El rostro de la Inmigración en los Estados Unidos: Daisy Cuevas « Holismo Planetario en la Web
[…] in Malagasy: Pero: ankizivavy kely mpianatra nanontany ny vadin’ny filoha amerikana momba ny fanavaozana ny… […]
02 Jona 2010, 21:02